विशेषज्ञको परामर्शमा मात्र गरौं छालाको उपचार » RealPati.com
ललितपुर, गालामा आएको पोतोले दिक्क बनेकी नयाँबजारकी अनिता खड्का ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको ड्रम डाइनामिकस् स्किन, हेयर एन्ड लेजर क्लिनिक पुगिन् । चायाँ र पोतोले सौन्दर्यमा ह्रास ल्याएको भन्दै तनावमा रहेकी उनी क्लिनिकमा सौन्दर्य विशेषज्ञ अनिल भट्टबाट परामशसंगै उपचारपछि उनको अनुहारको चायाँपोतो हट्यो र अनुहारमा पनि चमक आयो ।
त्यस्तै चाबहिलकी रुपा महत पनि आफ्नो मुहारमा आएको चाँया–पोतोबाट निकै चिन्तित थिइन् । २५ वर्षीया रुपाको विहेको कुरा चलेकोले उनमा थप चिन्ता थियो कि कतै पोतोको कारण आफुलाई हेर्न आउने केटाले रिजेक्ट गर्ने त होईन भनेर झन् चिन्ता थपिएको थियो । विभिन्न ठाउँमा उपचार गरी केही सीप नलागेपछि अन्ततः उनी सौन्दर्य विशेषज्ञ अनिल भट्टको सम्पर्कमा पुगिन् । त्यसपछि उनको उपचार भयो ।
सौन्दर्य विशेषज्ञ डा.भट्टका अनुसार उपचारका लागि सही ठाउँमा नपुग्दा रुपा जस्तै धेरैको अनुहार झनै कुरुप हुन पुगेको छ । उनका अनुसार भरपर्दो चिकित्सकसँग सल्लाह नगरी कस्मेटिक सामग्रीको प्रयोग गरेकाले महिलाहरुमा यस्ता समस्या झनै बढेको छ । चिकित्सकको सल्लाह विना कस्मेटिक प्रयोग गर्नाले चाया–पोतोबाट हैरान भएर उपचारका लागि आफुकहाँ धेरै आउने गरेको डा.भट्ट बताउँछन् ।
महिला र पुरुष दुवैमा यो समस्या देखिन सक्छ । यो समस्या लिएर महिला, पुरुष दुवैजना आउने गरेको डा.अनिलको अनुभव छ ।
नक्सालमा रहेको एक बैंकमा कार्यरत सविता श्रेष्ठ मुहारमा आएको चाउरीपनादेखि दिक्क थिईन् । उनले लतिलपुरमा रहेको ड्रम डाइनामिक स्किन, हेयर एन्ड लेजर क्लिनिक पत्ता लगाएर त्यहाँ चाउरीपनको उपचार गराईन् । बोटक्सलगायत भ्याम्पायर फेसियल, स्किन टाइटिङ ट्रिटमेन्टका लागि उनि निरन्तर क्लिनिकमा जाने गरेको बताउँछिन् ।
उमरले ६० काटेकी रिता शर्मा झट्ट हेर्दा ४० वर्षकी जस्ती देखिन्छिन् । यसको राज हो, बोटक्स ईन्जेक्सन । अनुभवी सौन्दर्य विशेषज्ञको परामर्समा मात्र यसको प्रयोग गर्नुपर्ने डा. अनिल बताउँछन् । यसबाट कुनै दिर्घकालिन साईड ईफेक्ट नहुने भएकाले यसको प्रयोग हाल अत्याधिक बढेको उनको अनुभव छ । दिनमा ४ देखि ५ जना बोटक्सको लागि आउछन्, उनि भन्छन् –“ नेपालका चर्चित सेलिब्रेटीहरु पनि आफ्नो सुन्दरताको निम्ति विभिन्न उपचारका लागि र केहि भिजिटका लागि आईसेकेका छन् भने धेरै आउने क्रममा पनि रहेका छन् ।” बोटक्स ईन्जेक्सन प्रायः धेरैजसो सेलिब्रेटीलगाएत सर्वसाधारणहरुले गर्ने गरेको उनको भनाई छ । बोटक्स ईन्जेक्सन धेरै महंगो पनि नपर्ने र छालामा असर पनि केहि नगर्ने बरु यसले फाईदा बढि गर्ने भएकाले धेरैको यसप्रति आकर्षण बढ्दो छ ।
ईटहरीकी कविता घिमिरे मुहारमा डण्डीफोर आएर हैरान थिईन । गाला नै ढाक्नेगरि आएको डण्डीफोरले आफ्नो आत्मविश्वास नै गुमाएको अनुभवसहितको गुनासो बोकेर डा. भट्टकोमा आईपुगिन् । उनले अन्य स्थानमा धाउँदा पनि समस्या समाधान नहुँदा यहाँ आएर सहि उपचार पाएको बताईन् । अहिले उनको अनुहार सफा र चमकदार भएको उनि बताउँछिन् । तर महिलामा मात्र नभएर पुरुषमा पनि डण्डिफोरको समस्या आएर उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।
कुमारीपाटीमा रहेको ड्रम डाइनामिकस् स्किन, हेयर एन्ड लेजर क्लिनिक छालासंग सम्बन्धित धेरै किसिमको उपचार हुन्छ । झोल्लिएको छाला, नमिलेको गाला, निधार आदि मिलाउन, आगोले पोलेको दाग हटाउन, बाङ्गो कान सामान्य बनाउन, ओठ र तालु फाटेको बनाउन, ओठ सानो–ठूलो बनाउन, आँखा र निधारमा भएको चाउरीपना हटाउन, चायाँपोतो हटाउने, डण्डीफोर, अनावश्यक कोठी हटाउने, नंङमा देखिने समस्याको उपचार, कपाल झर्ने समस्या रोकथाम र उमार्ने विधि, शरिरका अनावश्यक रौं लेजर प्रविधिबाट हटाईन्छ भने ट्याटुसमेत हटाईने डा.अनिल भट्टको भनाई छ ।